Ary isika mba ahoana ? | NewsMada
Maimbo, masiso, mantsina… Izany no rivotra iainana eto an-drenivohitra amin’izao fotoana izao. Vokatry ny fitobahan’ny fako amin’ny faritra maro, mihanaka mila hanapaka ny lalana no mahatonga izany. Tsikaritry ny rehetra fa tao anatin’ny herinandro maromaro izao no efa tsy misy mpaka, tsy misy mpanala ireny fako ireny. Ny tena raharaha dia ity : efa manomboka milatsaka izao ny orana. Manevokevoka be, mila hanempotra ny hafanana. Mitobaka eny an-tsena ny manga. Hiakatra tsy ho ela koa ny letisia, voankazo anisan’ny tena miantso sy manangon-dalitra. Manginy fotsiny ny setroka mainty avoakan’ny fiarakodia maro, efa tsy ara-dalana intsony kanefa mbola afaka mifamoivoy eto an-drenivohitra, sns. Tsy resahina intsony ny fisian’ny valan’aretina pesta izay mbola mitoetra sy efa nahafaty olona maromaro, tao anatin’ny volana vitsivitsy izay.
Mahavariana ihany ny mahafantatra fa hoe resaka taratasy no mbola tsy ahafahan’izany fiarabe vitsivitsy maromaro vao azon’ny orinasa Samva izany. Ny Samva izay fantatra fa tompon’antoka amin’ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra. Efa elaela ihany anefa no nahalalana ny fahatongavan’ireo kamiao be ireo, kanefa mbola tsy hitan’ny olona manao ny asany. Fa inona no olana amin’ny tsy ahavitan’ny minisitera miandraikitra ny fanaovana izany taratasy izany ? Ny zava-mitranga, araka iretsy voalaza etsy ambony iretsy anefa efa tena mila hahafaty am-pitsanganana.
Ny ohatra izao, rey olona, no tokony hanaovana fihetsiketsehana, fitakiana, fidinana an-dalambe, filanjana sorabaventy, barazy… Aina ity, hoy Rainimanonja. Efa mila tsy ho zaka intsony. Ny karazan-ketra takina tsy tapaka amin’ny vahoaka, ny mpivarotra, ny mpandraharaha… Tsy hita akory anefa izay tamberin’izany. Tsy mahagaga raha malaina handoa hetra, hanefa ny adidiny ny olom-pirenena.
Jereo sy araho kely ange ny zava-misy any ivelany any. Ny an’ny olona rehefa misy tsy mahafaly azy, henjana be ny fihetsiketsehana an-dalambe. Miray hina sy miara-mientana ny rehetra, na tsy mitovy firehana aza rehefa akamban’ny olana iraisana. Miantsoantso ny fitondrana handray ny andraikiny. Izany no tena fahalalahana, izany no tena demokrasia, ka na hiafara amin’ny fifandonana amin’ny mpitandro filaminana aza, tsy misy miala fa miara- mirona raha tsy mivaly ny fitakiana. Ary isika mba ahoana ?